Temple Oche Achicha - Imewe Mmewe
Oche Achicha Site na-ewu ewu na-abawanye na ịme achịcha n'ụlọ anyị nwere ike ịhụ mkpa ọ dị maka nkwụnye achịcha nke ugbu a, nke enwere ike ịchekwa ya na kọbọd ma ọ bụ sere. Ọ dị mfe ihicha ma saa akwa. Islọ nsọ dị mfe ijikọta na kensinammuo site na ibugharị efere a na etiti spain. Aschụpụ ndị mmadụ bụ nfe dị mfe site na ịdọrọ ha laa azụ. Stacker jikọtara isi ihe anọ niile. Ihe ngwadoro a na-enyere aka mee ka ihe niile dị na ya dịrị n'otu maka nchekwa echekwara echekwa ya. Nwere ike iji nhazi ọkwa dị iche iche maka oge dị iche iche.
Aha oru ngo : Temple, Aha ndị na-emepụta ya : Chris Woodward, Aha onye ahịa : CWD ltd .
Oche Achicha Chris Woodward Temple